Ny fironana amin'ny fividianana antsinjarany sy ny mpanjifa amin'ny taona 2021 | Martech Zone
Ny fironana amin'ny fividianana antsinjarany sy ny mpanjifa amin'ny 2021
Raha nisy indostria hitantsika fa niova be tamin'ny taon-dasa dia fivarotana antsinjarany izany. Ireo orinasa tsy manana fahitana na loharanon-karena hampiasa nomerika dia rava noho ny fanidiana sy ny areti-mandringana.
Araka ny tatitra dia nikatona ho 11,000 ny fanidiana fivarotana antsinjarany tamin'ny taona 2020 ka 3,368 ny fisokafana fivarotana vaovao.
Miresaka Business & Politika
Tsy voatery nanova ny fangatahana entana fonosana ho an'ny mpanjifa izany (CPG), na izany aza. Nandeha an-tserasera ny mpanjifa izay nandefasan'izy ireo azy ireo ny vokatra na nitahiry fakana entana izy ireo.
RangeMe dia sehatra an-tserasera izay ahafahan'ny mpividy antsinjarany mahita ireo vokatra vao misondrotra ary manome hery ireo mpamatsy hitantana sy hampitombo ny marika aman-dry zareo. Namokatra an'ity infographic antsipirihany ity tamin'ny fironana antsinjarany sy CPG ambony indrindra ho an'ny 2021 izy ireo.
22021 dia fotoana ho an'ny orinasa hanaporofoana ny tenany amin'ny ho avy rehefa manohy mizaha ny vokatry ny areti-mandringana manerantany isika. Ho an'ny mpanjifa, mpamatsy ary mpivarotra, ny fahitana vokatra vaovao dia hanana hyperfocus amin'ny fahasalamana sy fahasalamana ary fitomboan'ny fandraisana andraikitra maharitra sy fahasamihafana. Hisy ihany koa ny fanamafisana ny fahamoran'ny fiantsenana, ny fidirana an-toerana ary ny fahatsiarovan-tena amin'ny vidiny.
Ny fironana antsinjarany sy CPG ambony indrindra amin'ny taona 2021
Fironana fivarotana lehibe indrindra
Fividianana mahatsapa vidiny - 44% amin'ireo mpividy no mikasa ny hampihena ny fividianana tsy ilaina satria mitombo hatrany ny tahan'ny tsy fananan'asa.
Vidio-izao-mandoa-any aoriana - Nisy fiakarana 20% isan-taona-taona (YoY) noho ny fividianana vola-ankehitriny-karama taty aoriana - mitentina $ 24 miliara amin'ny varotra.
Diversity - Amin'ity vanim-potoana vaovaon'ny mpanjifa mahatsiaro tena ity, miasa ny indostria amin'ny fametrahana ny fampidirana sy ny fahasamihafana ho lohalaharana ary mametraka ny vokatra an-tsokosoko an'ny vitsy an'isa ho eo afovoany.
maharitra - Ny mpanjifa mahatsiaro tontolo iainana dia maniry ny marika hampihenan'ny habetsaky ny fonosana ampiasainy.
Miantsena kely, miantsena eo an-toerana - Ny 46% n'ny mpanjifa dia azo inoana kokoa fa hiantsena amin'ny orinasa eo an-toerana na amin'ny orinasa kely amin'ity fialantsasatra farany ity noho ny fialantsasatra teo aloha.
tsy hanahirana - 53% -n'ny mpanjifa no mikasa ny hiantsena amin'ny fomba mahavonjy fotoana, na dia tsy ny vidiny ambany indrindra aza.
Ecommerce - Nisy fiakarana 44% amin'ny fiantsenana an-tserasera, avo telo heny amin'ny tahan'ny fisondrotana isan-taona any Etazonia tamin'ny taona lasa!
Brick & Mortar novaina - 44% amin'ireo mpaninjara 500 be indrindra miaraka amina magazay ara-batana no nanolotra fiakaram-by, sisin-tsambo ary Mividiana an-tserasera, alao amin'ny magazay (BOPISA)
Fironana mividy fividianana mpanjifa
Indulgences lafo vidy sy Premium - Ny varotra lafo vidy tamin'ny taona 2020 dia nitombo 9% tamin'ny taona lasa satria ny olona miasa any an-trano dia mijery manatsara ny tontolo iainany sy manala-tena.
Saina sy sakafo mahavelona - 73% amin'ireo mpiantsena dia manolo-tena hanohana ny fahasalamany; 31% amin'ny fividianana entana bebe kokoa natao ho an'ny fahasalamany (ao anatin'izany ny lanjany, ny fahasalamana ara-tsaina, ny tsimatimanota, sns.)
Fahasalamana - Ny 25% -n'ny mpanjifa eran-tany dia mijaly amin'ny olana ara-pahasalamana mandevona. Ny mpanjifa dia mahatratra ny vokatra manohana azy ary misoroka ny vokatra tsy.
Fiverenana akanjo - Rehefa mihemotra ny areti-mandringana dia manantena ny fitomboan'ny 30% amin'ny varotra akanjo amin'ity taona ity ny indostria.
Boom-miorina amin'ny zavamaniry - Nisy fitomboan'ny 231% YoY tamin'ny volana martsa ny varotra fivarotana zava-maniry vaovao miorina amin'ny fahasalamana, ny sakafo isan-karazany ary ny fisian'ny vokatra.
Mocktails - Nisy fiakarana 42% amin'ny fikarohana Google ho an'ny zava-pisotro tsy misy alikaola!
Fironana momba ny fividianana mpanjifa manerantany
Fahasalamana misoroka - 50% amin'ireo mpanjifa sinoa dia mikasa ny handany bebe kokoa amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana fisorohana, vitamina ary famenon-tsakafo, ary sakafo biolojika.
Vokatra maimaim-poanas - Nisy fitomboana 9% ho an'ny vokatra tsy fahazakana sakafo. Any Vietnam, ohatra, ny mpisolo ronono tsy misy ronono toy ny karazana ronono an-tavy dia mitombo laza.
Vegan - 400,000 ireo mpanjifa britanika nanandrana sakafo vegan tamin'ny taona 2020! Orinasa 600 any UK no nampiroborobo ny Veganuary ary namoaka vokatra vegan vaovao miisa 1,200.
Sourcing an-trano - Ny 60% -n'ny mpanjifa any Espana dia mahita ny vokatra fihinana Espaniôla ho zava-dehibe amin'ny fividianana. Ireo mpanjifa alemanina dia nanosika ny fironana hividy eo an-toerana ho amin'ny faharetana sy ny andraikitra ara-tsosialy.
Tags: fitafianabopisbiriky sy rihitramividy karama an-tserasera amin'ny fivarotanafanelanelanana mihidyfironana mividy mpanjifaentana fonosin'ny mpanjifasourcing an-tranovarotra ivelan'ny Internetmarketing marketingvarotra an-tseraserafahasalamana fisorohanamahatsapa vidinyvarotra varotrafironana fivarotanamaharitraVegan
Ahoana ny fomba hanombohana podcast ho an'ny orinasanao (miaraka amin'ny lesona ianarako avy amiko!)